Tag Archive for "कम्पनी" - के तपाई जागिरको लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ? [थाहा पाउनुस यस्ता कुरा]
के तपाई जागिरको लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ? [थाहा पाउनुस यस्ता कुरा]
एजेन्सी । के तपाईंले कुनै अफिस वा कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिन जान लागेको कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। कम्पनीको ‘वेबसाइट’ मार्फत अथवा गुगलमार्फत कम्पनीको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। सम्भव भएसम्म कम्पनी किन खोलिएको हो, के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्नेसम्म थाहा पाउनुहोस्। थाहा पाएका जानकारी कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर कपीमा नोट गर्नुहोस्। अन्तर्वार्ता लिने मान्छे को हो भन्ने थाहा छ भने उक्त मान्छेको बारेमा थाहा ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न पाँच कम्पनीका शेयर सूचीकृत भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार एनसिसि बैंकको ७९ लाख ११ हजार २८१ कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएका छन् । यस्तै जानकी फाइनान्स लिमिटेडको आठ लाख ८७ हजार ४६६ कित्ता शेयर लाभांश, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २० लाख कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ । स्टकका अनुसार बेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको सात लाख ४७ हजार ५६१ क... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न इटालीको कम्पनी सिएमसी दी राभेनालाई नै फर्काउन खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले पहल शुरु गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गत महीना ठेक्का सम्झौता तोडे पनि मन्त्री मगरले पुरानै कम्पनीमार्फत काम सक्न पहल गरेका हुन् । नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत काम गर्दा समय र लागत दुवै बढ्ने भन्दै उनले ठेकेदार कम्पनीलाई नै फर्काउन वार्... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सरकारले हालैमात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकारीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । टेलिकमको मुख्यालय भद्रकाली प्लाजामा आज कर्मचारीले उनको स्वागत गरेका थिए । पदभार ग्रहणपछि प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले व्यावसायिक संस्थाका रुपमा टेलिकमलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले चौथो पुस्ताको ... थप पढ्नुहोस्
समयमै पुल नबनाउने ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा !
खोटाङ । तत्कालीन सांसद हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले २०७३ मंसिर २२ गते खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका –५, लफ्याङ र साकेला गाउँपालिका –५ मात्तिम जोड्ने साप्सु खोलामा पक्की पुल शिलान्यास गरेका थिए । साविकको सदरमुकाम दिक्तेल र दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय तहलाई जोड्ने उक्त मोटरेबल पुल म्याज गुज्रेको लामो समय बित्दा पनि पूरा नभएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराई ठेकेदारविरुद्ध उत्रिएक... थप पढ्नुहोस्
लापर्वाही गरेको पाइएपछि दश कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । निर्माण कार्यमा चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न दश निर्माण तथा मालबस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो । कार्यालयकाअनुसार इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेशनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेशनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, ... थप पढ्नुहोस्